Jack the Giant Slayer (2013) – MM Subtitles
‘Jack the giant Slayer’ ရုပ်ရှင်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ မူရင်းအင်္ဂလိပ် ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ Jack the giant Killer နဲ့ Jack and the Beanstalk ဆိုတဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပါ။
ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးအကြားက ဂွမ်တူဝါ ဆိုတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုမှာ ဧရာမလူသန်ကြီးတွေနေကြပါတယ်။ လူပြည်က ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ မှော်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပဲစေ့တွေကိုမြေပြင်မှာစိုက်လိုက်ရာက ပေါက်လာတဲ့အပင်ကြီးတွေဟာ ထိုအကောင်ကြီးတွေ နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကိုတည့်တည့်ရောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီမှာ သူတို့တွေ့လိုက်ရတာက ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာင်းကင်ဘုံမဟုတ်ပဲ သွေးဆာနေတဲ့လူသန်ကြီးတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အပင်ကြီးတွေကနေတဆင့် လူ့ပြည်ကိုဆင်းသက်လာပြီး လူသားတွေကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာစားသောက်ကြတဲ့ လူသန်ကြီးတွေကိုတားဆီးဖို့ သူတို့နှလုံးသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သရဖူတစ်ခုကို ဘုရင်ကြီးအဲရစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူသန်ကြီးတွေကို နေရင်းအရပ်ကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ရာပေါင်းများစွာကြာပြီး တစ်နေ့မှာ ဂျက်ဆိုတဲ့ လယ်သမားလေးဟာ မြင်းရောင်းသွားရင်း ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ ဆုံခဲ့ရာက မြင်းကို ပဲစေ့တွေနဲ့ လဲလှယ်သွားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့် ပဲစေ့တွေဟာ သူလက်ထဲကိုရောက်လာပါတော့တယ်။
ရေစိုလို့မရတဲ့ပဲစေ့တွေဟာ မိုးရေဒဏ်ကြောင့် ရေစိုသွားတဲ့အခါမှာတော့….
လယ်သမားလေး ဂျက် တစ်ယောက် ဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲ….
အဲဒီနေ့ညမှာပဲ နန်းတော်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ မင်းသမီးလေး အစ္စဘယ်လ်ကရော ဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲ….
လူသန်ကြီးတွေကို သူတို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ….ဆိုတာကို အတူကြည့်ကြရအောင်ပါ။
IMBD rate 6.2 ရထားတဲ့ကားလေးပါ။
Animation ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားမို့ ကြည့်ရသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေမယ့်ကားမျိုးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
IMDb Rating 6.2 128,527 votes
TMDb Rating 5.7 3,746 votes
Download 480p G Drive 485 MB
Download 480p Yandex 485 MB
Download 480p MyanCloud 485 MB
Download 720p G Drive 854 MB
Download 720p Yandex 854 MB
Download 720p MyanCloud 854 MB